သင်၏နောက်ဆုံးအီးမေးတွင်မည်မျှမျက်နှာများရှိသနည်း။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 3, 2011 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2011 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့လျှင်သက်ဆိုင်ရာအီးမေး (၁၀၀) ကျော်ရရှိသည်။ အထူးသဖြင့်အီးမေးလ်ကသိပ်မတော်တဲ့အချိန်မှာဒါဟာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ ဤကဲ့သို့သော LinkedIn အီးမေးလ်များသည်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်အတွင်းရှိအလုပ်အကိုင်နေရာများပြောင်းလဲသွားသောလူများ၏အကြောင်းကိုပြောပြပါသည်။ မျက်နှာများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးဒီရှေးရှေးများနှင့်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးရန်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ငါဒီ LinkedIn အီးမေးလ်အီးမေးလ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမြင့်ဆုံးကလစ် - မှတဆင့်နှုန်းထားများတစ် ဦး ရှိကြောင်းတော်တော်လေးသေချာပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်နေ့လုံးအီးမေးလ်များကိုသူတို့အတွင်းရှိလူများ၏အမည်များနှင့်အခြေအနေအပြောင်းအလဲများဖြင့်ရရှိသော်လည်း၊ သို့သော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ချက်ချင်းပင်တိတ်ဆိတ်စွာနေပြီးကျွန်ုပ်ကို ဖြတ်၍ သွားရပါမည်။ ကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေတယ်။ လူတွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေ (ဓာတ်ပုံတွေမဟုတ်တဲ့) ပါတဲ့အီးမေးလ် CTRs နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုမင်းမြင်ဖူးလား။ ငါထင်လျှင်သင်တစ် ဦး ထားလျှင် မျက်နှာအစစ်အမှန် သင်၏အီးမေးလ်များတွင်သင်ရရှိကောင်းရနိုင်သည် အစစ်အမှန်ရလဒ်များ.
လူမှုမီဒီယာနှင့်အောင်မြင်မှု - တာရှည်ခြင်းနှင့်ဖြတ်ခြင်း
သြဂုတ် 4, 2011 မှာ 7: 15 AM
4:2011 pm တွင်သြဂုတ်လ 8, 04
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လက်မှတ်, Kenneth! ငါထင်တာကတော့လူတွေရဲ့ဓါတ်ပုံတွေဟာအမြဲတမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်၊ စာသားထက်ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။
သြဂုတ် 5, 2011 မှာ 12: 06 AM
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လက်မှတ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ! ရှေးရှေးအဘို့ဆင်း scroll ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဖောက်သည်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ဓာတ်ပုံများထည့်ခြင်းသည်အီးမေးလ်ကိုကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားပြုရန်နှင့်စာဖတ်သူများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိသိလိုသည်။ ငါတို့စမ်းသပ်ဖို့လိုကောင်းလိုလိမ့်မယ်။